Yintoni cryptocurrency ukuba abatyali bayacetyiswa ukuba athengise, yaye nguwuphi ukuze ugcine? - Blockchain News
UCanzibe 29, 2018 admin
Ekupheleni kukaMeyi axakwe ishishini crypto kunye nomzamo ephawulekayo bearish kwi exchange. Xa ezintathu yokugqibela May, i TOP-25 cryptocurrency wabonisa ukwehla obonakalayo. ke, ku May 22, bitcoin wawa ngezantsi $ 8000 okokuqala ukusukela ngo-Epreli 18. KaEtere and Bitcoin Cash yazika 14% kwiveki, video – yi 6%, kunye XRP – yi 8.5%. Kuphela ngawo lowo veki waba sinh (TRX), eyachaza ukunyuka okungephi kuchaphulo yayo.
Isiqhelo enye amakishayo umthengi oyinhloko – lulwahlulo cryptocurrency iperi Ethereum and Bitcoin – Kwakhona sitshintshele enye ezantsi. Ngenxa yale nto, namanye Altcoins, esekelwe kwi Ethereum blockchain kunye, ke, inxenye kuxhomekeke kwindawo yayo, unokuwa kabukhali ukuba isantya bitcoin liqhubeka lincipha. Ngaxeshanye, i capitalisation cryptocurrencies kwimarike oluqhelekileyo yehle $ 322.5 billion, unokukhawuleza ngu 14% kuthelekiswa ezintathu yesibini ka May.
Yintoni Kufuneka abathengisi ntoni kwimarike, elijikajikayo kuba ezihamba ngamathupha azo bearish? kutshanje, abatyali zimali linge sele abanezakhono yantle kunembambano cryptocurrencies kwaye sele iingcebiso ngamandla abarhwebi ukuba bathenge, ntoni ukuze ugcine noko ukuba athengise. Nangona ngoJanuwari kulo mkhwa phakathi abatyali eyake elikhulu ngokufunda nje.
Cryptocurrency bezimali bancoma
Umzekelo, Spencer Bogart, neqabane e Blockchain Capital, ukholelwa ukuba imeko yangoku phezu konxibelelwano iyingenelo ukuthenga ngempumelelo. “Ekubeni bitcoin isandula kusetyenziswa ngakumbi yaye ngokufuthi ngakumbi yaye usenalo izinto ezininzi lwamaziko, oko kubalulekile imali kulo. Yonke imizi egcina imali ezinkulu bazama ukusebenza naye, banikele iiklayenti zazo. Ezinye maqonga trading. A kumaziko inzulu bitcoin yi HIV jikelele, “isithethi sathi.
Nangona Dynamics ukuhla cryptocurrency yokuqala yehlabathi, Bogart nto yasenza kakhulu ngekamva. “Ngaba bitcoin ibe kubiza? ngokuqinisekileyo. Kodwa ngaba ucinga ukuba ngonyaka ikhondo lakhe liya kuba ngaphezulu? Kubaluleke qiniseka, “- yena wachaza ukuba udliwano for CNBC.
uqikelelo positive, kunjalo, ayisebenzi altcoins. “cryptocurrencies abaninzi overvalued nokungathembeki. Kukho amathuba ngokuthi “ukudubula”, kodwa babe imiqobo emininzi kule, “Bogart uthe.
Enye iqala umtyali icebisa ethatha sihlolisise Cardano (ADA), sinh (TRX), umthambo (ukususela) kunye neo (Neo).
Okubangel 'umdla kukuba, njengoko ngokuba Ethereum Spencer Bogart uthanda ukuba balumke. “Le nto, kukho ezininzi ICO kwi Ethereum blockchain. Akwaziwa kuya kwenzeka ntoni kule projekthi nendlela oku kuya kuchaphazela yokwaneka ikhosi Ethereum,” waphawula. “Kwelinye icala, Bendiya angabambeki isipaji abadlali ezinkulu ezifana Ripples, Bitcoin Cash and eos.”
Ezinye abathanda crypto bavakalise iingqikelelo kunokuba balumke. “Kufuneka wenze ntoni xa Umkhuba bearish, leyo, kwixesha eliphakathi, akukho kuqinisekiswa yi nto? Oku nakanjani akuyomfuneko ukuthenga cryptocurrency ukuze lentelekelelo. Ukuba uye kuthabatha into iinyanga ezintandathu okanye unyaka, ke musa kuthatha nantoni na. Ukuba sele bahleli isicwangciso portfolio ixesha elide, ke ubambe, ngenxa Umkhuba elifutshane akucaci nokuba kuya kuba lula ukuba siphume size ukutsibela kwakhona ngexabiso elihle kakhulu. Ukuthengisa kwenza kuphela ingqiqo xa ngaba umrhwebi professional. Kodwa ke ukutshintshisa, inyaniso, kuphela imijubo zobugcisa, kunjalo kunjalo kubhetele ukugcina impahla zabo. Nje, Ingcebiso yam ukunikela ingqalelo altcoins nge capitalisation eliphantsi, ngokuba imarike ngoku azinze, kwaye altcoins emva bitcoin ukuba wayetshona ngamanye amaxesha ngaphezulu.
Kufuneka wenze ntoni kweemeko recession kwimarike, Umrhwebi ngalinye isigqibo ngokwakhe. Eyona nto ibalulekileyo kukuba ukwenza ngokuchanekileyo ipotifoliyo yakho cryptocurrency kwaye aphakuzele ukuba kukho ukuhla kwimarike. Ingakumbi on ezifana simbi njenge cryptocurrency.
Post Previous:Blockchain News 29.05.2018
EyoMqungu 15, 2019
EyoMqungu 13, 2019